Heinrich Heine University Dusseldorf - Study eJalimane
Heinrich Heine University Dusseldorf Yokuxhumana
isifinyezo : HHU
Wasekelwa : 1965
abafundi (ngu.) : 21000
Ungakhohlwa xoxa Heinrich Heine University Dusseldorf
Bhalisa at Heinrich Heine University Dusseldorf
Heinrich Heine University Dusseldorf ingenye Encane zemfundo ephakeme esifundazweni North Rhine-Westphalia - eyasungulwa ngo 1965. Kusukela 1988 iyunivesithi wethu uye wathwala igama yamadodana dolobha ayetholakala. Namuhla azungeze 30,000 abafundi ukufunda campus yesimanje ngaphansi kwezimo Lifanele ukuphila academic.
Ngenxa eyunivesithi campus lapho konke useduze ndawonye, zonke izakhiwo kubandakanya Hospital University kanye nemitapo ezikhethekile kalula ofinyelelekayo. Iminyango wenyuvesi ujabulele wazakhela idumela elihle kakhulu ngenxa isibalo ithatha okusezingeni izikhungo zocwaningo ngokubambisana. Ngaphezu kwalokho, inhloko-dolobha yezwe Dusseldorf kuyisixazululo imvelo ekhangayo nge high lokuphila.
With ezingaphezu kuka 3,000 abafundi semester ebusika 2011/12, Faculty Medical iyunithi lesithathu ngobukhulu HHU sika. Isifundo inikeza basukela Okwelapha Nokuhlinza Dentistry (luhlolo isimo) ngokusebenzisa Toxicology (M.Sc.) I-Public Health kanye Endocrinology (kokubili M.Sc., imfundo eyengeziwe). Graduate izifundo ziye izikhungo ifomu khono-wide Wezocwaningo School Dusseldorf, alinikela zokuxhumana, amasevisi kanye nokweluleka kokubili abafundi iziqu kanye netindvuna zabo. Ngaphezu kwalokho olwakhiwe zobudokotela lokuxhasa olunikezwa amaqembu ukuqeqeshwa nocwaningo e neurosciences (RTG 1033, iBrain), e Hepatology (ukuqeqeshwa nocwaningo e CRC 974) futhi ocwaningweni isimila (Dusseldorf School ofOncology DSO). Ucwaningo Izikhumulo nge umthamo enkulu kwezisekeli zokulalelwayo zamaqembu esithathu eyasungulwa amaphrojekthi ngokubambisana kukhona Hepatology (CRC 974 futhi Research Unit 217), ucwaningo senhliziyo, neurosciences, ukuhlinzwa (Unit Ucwaningo 1585), infectiology futhi ngokuzivikela komzimba ezifweni (Unit Ucwaningo 729), Ucwaningo sikashukela andmetabolism. I Biomedical Research Centre (BMFZ), the Leibniz-Institute for Environmental Medicine (IUF), C. O. Vogt Institute for Brain Ucwaningo kanye German sikashukela Centre (ddz) izinhlangano ezibalulekile ukuthi zakha wendawo ucwaningo imvelo.
Ubuciko kanye Humanities
mayelana 8,000 abafundi (semester ebusika 2011/12) e okwamanje 26 B.A. futhi M.A. izinhlelo ukwenza Faculty of Arts futhi iyunithi ngobukhulu Humanities HHU sika. Inkosi Uhlelo German-French Abezindaba Culture Ukuhlaziywa / Imikhuba Cultural Ukuhlaziywa, zenza abafundi bakwazi ukuthola i-diploma kabili kokubili HHU kanye University of Nantes. Ezingeni zobudokotela sokuqeqesha the Faculty of Arts and Humanities, Phil Ibanga, inikeza ezibanzi lokwelulekwa nokubonana nabanye umsebenzi-olufanele izifundo. ngokwengeziwe zobudokotela olwakhiwe ukuhlinzeka izinhlelo emlandweni art (RTG 1678), e yezilimi(ukuqeqeshwa nocwaningo e CRC 991), ezifundweni eziphathelene ne-yokuguga ocwaningweni intando yeningi (Link.De) kanye ngaphakathi izinhlelo ezimbili German-Italian (Interculturality futhi Ukuxhumana, “Doctor Europaeus”). Phakathi Izikhumulo ucwaningo ubuhlakani kukhona yezilimi (CRC 991), ezombusazwe (Unit Ucwaningo 1381), umlando wasendulo (oxhaswe NRW Academy Ubuciko kanye Sciences), umlando art, nokuhlela izifundo (ephelele imisebenzi izinhlelo Max Weber futhi Martin Buber kuyaqhubeka). Ngalé kwalokho, Faculty of Arts Nezabantu kunomthelela Institute HHU sika-German kanye International Party Law and Party Ucwaningo (trump).
Mathematics kanye ISayensi Yemvelo
ubuhlakani ngobukhulu HHU enikela cishe yayo 6,500 abafundi (semester ebusika 2011/12) izinhlelo eziyisisekelo eziyishumi (B.A. futhi isimo Luhlolo) nezinhlelo iziqu ayisishiyagalolunye (M.Sc.). izinhlelo ezikhethekile ezifana iminyaka emine "impohlo plus”, lapho abafundi bachithe konyaka Michigan State University, USA, kanye M.Sc ngamazwe. e Biology sikwazi abafundi ukuba bathole ulwazi ngamazwe. Khono uye izikhungo usekelo izifundo zobudokotela ngesimo iGRAD, the imikhakha eyahlukene Graduate Nocwaningo Academy Dusseldorf ukusungula inethiwekhi izakhiwo kanye nokuhlinzeka ukwelulekwa kanye ukuqeqeshwa zabafundi zobudokotela, abaqondisi kanye namaqembu ukuqeqeshwa nocwaningo. Ngaphezu kwalokho Esekelwa ngoba zobudokotela olwakhiwe ahlinzeke izinhlelo ezilandelayo: RTG 1203 Okuhambisa e Zezıhlabane Plasms (DFG), Graduate Cluster Tag, NRW Ucwaningo Academy Biostruct, RTG “Ama-molecule Ukutheleleka” (Penguin Foundation), yamazwe ngamazwe iziqu esikoleni iGRAD-Plant ngokubambisana Forschungszentrum Jülich futhi Michigan State University, US; futhi imizamo ngaphakathi uxhaso ezicacile, e-kuyinsakavukela, futhi iGRASPseed. Ucwaningo Izikhumulo nge umthamo enkulu kwezisekeli zokulalelwayo zamaqembu esithathu eyasungulwa amaphrojekthi ngokubambisana kukhona biology (Cluster of Excellence ku Plant Sciences CEPLAS) yemvelo (CRC-TR 6, CRC-TR 18). I Biomedical Research Centre (BMFZ) kanye Bioeconomy Science Center (yinhlanganisela 54 iminyango amayunivesithi Aachen, Bonn futhi Dusseldorf, kanye Forschungszentrum Jülich) izinhlangano ezibalulekile obumba wendawo ucwaningo imvelo.
Yokuphatha ibhizinisi kanye nezomnotho
Omunye amandla HHU abancane, Faculty of Business Administration kanye nezomnotho, bakhangwa mayelana 1,100 abafundi semester ebusika 2011/12. Khono ligcinwe Futuristic Oeconomicum isakhiwo futhi linikeza Business Administration (B.Sc. futhi M.Sc.), Ezomnotho (B.Sc. futhi M.Sc.) futhi Business Chemistry (B.Sc. futhi M.Sc., ngokubambisana neNhlangano Faculty of Mathematics kanye ISayensi Yemvelo). imfundo ephakeme bunikezwa Dusseldorf Business School (DBS), alinikela MBA-Izinhlelo ngokumelene imali yesikole. Izibonelo Jikelele Ukuphathwa MBAs (ngesiJalimane kanye ngesiNgisi) futhi Health Management (ngokubambisana neNhlangano Kwezempilo Academy Dusseldorf). A ezinkulu ucwaningo ihabhu kwezomnotho umncintiswano ezomnotho, ixhaswe ngokwesabelomali se-Project DFG ANR futhi igxile ku Dusseldorf Institute for Competition Economics (dice). izifundo Business ukugxila ezezimali, accounting, ukuphathwa nokumaketha.
Faculty of Law bahlinzeka cishe ngamakhasimende izifundo luhlolo isimo emthethweni ngokusebenzisa ngokubambisana neNhlangano ezikhungweni ezahlukene zendawo (isb. izinkantolo ezifana yiNkantolo Yokudlulisa Amacala, District Court kanye neKhotho Ezezimali). Ngalé kwalokho, amakhono Uyi Yiqiniso German-French izifundo kanye University of Cergy-Pontoise neticu extra-curricular emthethweni wamaNgisi namaMelika. imfundo ephakeme inikezwa yi Dusseldorf Law School (DLS), alinikela okuyinhloko-postgraduate ekuvikelweni kwamalungelo wokuhweba, amalungelo Imininingwane namalungelo yezokwelapha ngokumelene imali yesikole. Ucwaningo igxile nomthetho commercial, Umthetho wase-Europe kanye nezomthetho wezizwe ngezizwe. Izizinda kukhona Centre for Imininingwane Nobuchwepheshe Law (ZfI), Centre for Awomthetho Wezokwelapha (IMR), Insurance Law Institute, futhi i-Institute of German kanye International Party Law and Party Ucwaningo (trump).
I “mlando wakudala” ka Dusseldorf University laqala ne Dusseldorf Academy for Medicine esiwusizo 1907. inyuvesi yangempela dolobha wokuqala u-, Nokho, kuphela eyasungulwa ngo 1965 ngokungeza Faculty kuhlanganiswe of Natural Sciences-Ubuciko Nezabantu kulowo yezokwelapha ekhona. ezine kuphela kweminyaka nyuvesi esehlukanisa ubuhlakani elihlangene emizimbeni ezimbili ezihlukene, okwaholela umthethosisekelo we-Faculty of Arts Nezabantu kanye Faculty of Mathematics kanye ISayensi Yemvelo. Ngo 1979 yesimanje University futhi State Library wavulwa emphakathini, futhi isikhungo yezemidlalo kwanezelwa 1980/81. Ukulandela ukuxabana engaphezu kuka 23 iminyaka, le “nameless” eyunivesithi Dusseldorf wagcina christened ngemva imbongi Heinrich Heine, enye yamadodana Dusseldorf edume kakhulu, e 1989. Kule nkathi ku, eyunivesithi campus iye avulekayo maqondana edolobheni kanye netakhamiti talo. Faculty of Business Administration kanye nezomnotho Heinrich Heine University wazivula e 1990, Faculty of Law e 1993.
Uyafuna xoxa Heinrich Heine University Dusseldorf ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Heinrich Heine University Dusseldorf kumephu
Izithombe: Heinrich Heine University Dusseldorf Facebook ezisemthethweni
Heinrich Heine University Dusseldorf Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa ka Heinrich Heine University Dusseldorf.
University of Gottingen Gottingen
Gutenberg University of Mainz Mainz